Nọgidenụ na-a oké ọhịa njem na Jungle Mmụọ: Oku nke Wild oghere. Miri n'ime oké ọhịa, ọ bụ keguru mmiri, iru mmiri na home nke ọtụtụ ize ndụ ụmụ anụmanụ na-eyi egwu ụda. a mobileslots si NetEnt bụ a ise ukwu na 243 ụzọ iji merie oghere.
a mobileslots na mepụtara NetEnt. The ụlọ ọrụ a na-eke egwuregwu na-abụghị nanị ụtọ ma na-eso na-egbuke egbuke ndịna-emeputa na otutu atụmatụ.
Ise na-esi anwụde na 243 to 1,024 ụzọ iji merie oghere, this mobileslots bụ playable gafee niile ngwaọrụ site na 20p ka 100 ka atụ ogho. Magburu onwe 3D ndịna-emeputa ekenịm ke a ọhịa ebe ọhịa ọdịdị na-abịa ndụ. N'okirikiri nwere ike ịbụ energetic gafere ma ọ bụ izuike ọdịdị ụda. Ise dị iche iche ụmụ anụmanụ ndị na-atụ na-esi anwụde. Ndị a bụ agụ iyi, bea, ubí, enyí, na tiger. Kasị elu bara uru na akara bụ tiger nke ga-enye 150 coins ise on a payline. Akwụ ha ezigbo ụgwọ na akara na-vine kpuchie ebre kaadị A, K, Q, J, and 10.
The ọzọ na-agụnye:
Symbol Mmụba- Ọ bụla na akara na egwuregwu ewepu na ikposa e ji butterflies. Ọ bụrụ na ihe oyiyi ọ bụla nwere akara na urukurubụba bụ akụkụ nke a na-emeri ngwakọta, ihe nnọchianya ga-agbasakwa jupụta dum ukwu.
Butterfly agbam ume- A mma nwere ike kpaliri enweghị usoro na isi egwuregwu. Butterflies flutter banyere esi anwụde na-agbasa otu ise na akara na na-na-emeri atụ ogho.
Free Spins- Atọ ma ọ bụ karịa ifuru akara ngosi apụta n'ebe ọ bụla na isi egwuregwu ga-ịkpalite a mma. I nwekwara ike imeri 15 times your stake bonus if you land four scatters. ma, ọ bụrụ na ị na adaa ise chụsasịa, ị na-ọdịda 50 ugboro your eto bonus. Ozugbo ị triggered nke a mma, ị ga-esi na-egwu na 1,024 ụzọ iji merie. Mgbe ahụ mkpa ka ị họrọ ọ bụla nke na ise anụmanụ na akara. The anụmanụ na ị họrọ ga-abụ nanị elu uru akara ke esi anwụde n'oge free spins. All ise anụmanụ abịa na a kpọmkwem ọnụ ọgụgụ nke free spins na ọ dịghị ihe free spins nwere ike retriggered.
Agu-enye anọ free spins
Elephant-enye asatọ free spins
Bear-enye iri na abụọ free spins
Agụ iyi na-enye iri na isi free spins
Ajụala na-enye iri abụọ free spins
Jungle Mmụọ: Oku nke Wild bụ a na-ajụ ka elu ndịiche game. a mobileslots -abịa na oké bonus atụmatụ na anya ịtụnanya.